ကျွန်တော်ကျောင်းကအကြောင်း……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော်ကျောင်းကအကြောင်း…….
Posted by sumo on Oct 6, 2010 in Creative Writing |3comments
ကျွန်တော်အစိုးရကျောင်းကနေ နိုင်ငံတကာကျောင်းကိုပြောင်းတာ၃နှစ်ရှိပါပြီ…ကျွန်တော်ကျောင်းစစတက်တုန်းကပေါ.၇တန်းလောက်ကစာမလိုက်နိုင်ဘူးဗျ.စာမေးပွဲခနခနကြတယ်လေ….Final မှအောင်အောင်သွားတယ်…၈တန်းကြလည်းဒီလိုပါဘဲ…စာမေးပွဲကြတယ်လေ….၉တန်းကြတော.ကျွန်ောတ်အသိအမတယောက်ကစာတွေသင်ပေးတော.အောင်သွားခဲ.တယ်..ဒါပေမဲ.လည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောဘကြီးတာပေါ.နော်အဆင်.၁ကနေ၃အတွင်းဝင်ချင်တယ်ဗျ…ဒါပေမဲ.မ၀င်ခဲ.ပါဘူး….အဲ.ဒီလိုနဲ.အခုနှစ်၁၀တန်းရောက်တော.ပေါ……ကျွန်ောတ်ကိုအဲ.ဒီအမကြီးကလည်းမသင်ပေးနိုင်တော.ဘူးပေါ…..ကျွန်တော်ပထမလစစ်ဖြေရတယ်လေ.စာမေးပွဲကြတယ်ဗျာ….ဒါပေမဲ.ကျွန်တော်ကျောင်းကိုဆရာအသစ်ရောက်လာတယ်….သူကအရင်က၁၀ပြခဲ.တယ်လေ။။။….အဲ.လိုနဲ.ဘဲကျွန်တော်သူဆီမှာကျူရှင်ယူခဲ.တယ်…ကျွန်တော်ဆုလည်းတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိူ…ကျွန်တော်စာမေးပွဲမဖြေခင်တုန်းကကျွန်တော်.သူငယ်ချင်းတွေကိုပြောတယ်.( ငါအဆင်.၁ ကနေ ၃)အတွင်းရမယ်လို.ပြောတော.သူတို.ကပြောတယ်မင်း အဲ.လိုရဘို.အိမ်မက်မ မက်နဲ.လို.ပြောတော.ကျွန်တော်အားလျော.ခဲ.ပါတယ်….ဒါပေမဲ.ကျွန်တော်မခံချင်စိတ်နဲ.ကြီုးစားခဲ.တယ်……ကျွန်တော်ဆုလည်းတောင်းတာပေါ.ဗျာ……..ဒါနဲ.ဘဲကျွန်တော်မထင်မှတ်ဘဲ.အဆင်.၃ကိုရရှိတော.ကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်…..ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးအရမ်းတင်တာပေါ.ဗျာ။။။ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေကတော.ဘာမှမပြောတော.ဘူးပေါ…….သူတို.ကတော.ကျွန်တော်ကိုအထင်သေးခဲ.တယ်လေ.ဒါပေမဲ.လည်းကြိုါ်စားတော.လည်းဒီလိုဘဲပေါ.နော်…….
Kyaw Tun has written 1 post in this Website..
Views:4ကျွန်တော်အစိုးရကျောင်းကနေ နိုင်ငံတကာကျောင်းကိုပြောင်းတာ (၃) နှစ်ရှိပါပြီ(စပေ့မှာအစက်မထည့်နဲ့ )ကျွန်တော်ကျောင်းစစတက်တုန်းကပေါ့ (၇) တန်းလောက်က စာမလိုက်နိုင်ဘူးဗျ စာမေးပွဲခဏခဏကျတယ်လေ Final မှအောင်အောင်သွားတယ် (၈) တန်းကြလည်းဒီလိုပါဘဲ…စာမေးပွဲကျတယ်လေ…(၉)တန်းကြတော ကျွန်တော့အသိ အမ
တစ်ယောက်ကစာတွေသင်ပေးတောအောင်သွားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောဘကြီးတာပေါနော် အဆင့်(၁) ကနေ(၃) အတွင်းဝင်ချင်တယ်ဗျ ဒါပေမဲ့ မ၀င်ခဲ့ပါဘူး….
(သေနာ အစက်တွေမထည့်ပါနဲ့ ဆိုနေ) အဲ့ဒီလိုနဲ့ အခုနှစ်၁၀တန်းရောက်တောပေါ့။
ကျွန်တော့ကိုအဲ့ဒီ( ဒီနေရာမှာ သှ် ကို သုံး )အစ်မကြီးကလည်းမသင်ပေးနိုင်တောဘူးပေါ။ ကျွန်တော်ပထမလစစ်ဖြေရတယ်လေစာမေးပွဲကျတယ်ဗျာ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့့ကျောင်းကို ဆရာအသစ် ရောက်လာတယ် သူကအရင်က (၁၀) တန်းပြခဲ့တယ်လေ။။။(ပုဒ်က နှစ်ထီးလောက်ဆိုတော်ပြီလေကွာ ငါလခွီး) အဲ့လိုနဲ့ ဘဲကျွန်တော်သူဆီမှာကျူရှင်ယူခဲ့တယ် ကျွန်တော်ဆုလည်းတောင်းတယ် ဘုရားသခင်ကိူ(ကို နေရာမှာ နှစ်ချောင်းဝင်ထားတော့ အပြစ်သင့်နေပြီငါ့လူ)ကျွန်တော်စာမေးပွဲမဖြေခင်တုန်းကကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေကိုပြောတယ်
( ငါအဆင့် (၁) ကနေ (၃) အတွင်းရမယ်)
လို့ ပြောတော့သူတို့ ကပြောတယ်မင်း အဲ့လိုရဘို့ အိမ်မက်မ မက်နဲ့ လို့ ပြောတော့ ကျွန်တော်အားလျော့ခဲ့ပါတယ် (ငါ့ အဲ့သည်လိုလာပြော လက်ပြန်နဲ့ ပေးတာပေါ့ ဘာရမလဲ) ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မခံချင်စိတ်နဲ့ ကြီုးစားခဲ့တယ်(ကြိုးစားခဲ့တယ် -တော်သေးတယ် ဗမာစာလုံး ကို အမေရိကန်ကလူတွေ ဖတ်မတတ်ကြလို့ အဟိ) ကျွန်တော်ဆုလည်းတောင်းတာပေါ့ဗျာ(အေးပေါ့အေးပါ့ ဒါကတော့လုပ်ရမှာပေါ့) ဒါနဲ့ ဘဲကျွန်တော်မထင်မှတ်ဘဲ အဆင့် (၃)ကိုရရှိတော့ ကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်( ထပ်တူထပ်မျှပါမောင်ရာ ငါ့ မင်းထက်ပိုသေး ပြီးခံနီးပြီဟုတ်လား)ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးအရမ်းတင်တာပေါ့ဗျာ။။။(လာပြန်ပြီ နှစ်ချောင်းဆိုတော်ပြီဟဲ့ ချိတ်ချိုးလာပြီနော်) ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေကတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးပေါ။
သူတို့ ကတော့ကျွန်တော့်ကိုအထင်သေးခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့လည်း ကြိုါ်စားတော(ကြိုးစားတော့ -ငါလွတ်လွတ်) လည်းဒီလိုဘဲပေါ့နော်။ (ဟေးးးးးပြီးပြီကွ)
ပရိတ်သတ်ကြီးခင်ဗျား အတွေ့ ကြုံမရှိသေးတဲ့ညီငယ်လေးကို နာလည်ပေးကြစေလိုပါတယ်။
အထူးအစီစဉ် အနေနဲ့ကျွန်တော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီ အောင်ပု အဲဒစ် ပြုထားသည်မှာ စာဘယ်နှစ်လုံးရှိသည် ဆိုတာကို သေချာစွာ ပြောပြနိုင်သူများကို ဥာဏ်ပူဇော်သည့် အနေအဖြစ်ဖြင့်
ဂျပန်ကားလေးဖြင့် လုပ်ထားသော မြန်မာ ဓားမ တစ်လက် နှင့် ငါးငပိ တစ်ဆယ်သားကို ဆုအ ဖြစ်ဖြင့် ပေးပါမည့်အကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
အင်္ဂလိပ်ကျောင်းက ကလေးတယောက်ပါ … ဆရာကြီး စာတွေကုန်းကုန်းပြီးရိုက်နေတာ ကျနော့လဲပြပေးပါဆိုလို့ … ဆရာကြီးခေါ်တာနဲ့ဒီကလေးသိတတ်သားဘဲဆိုပြီး
ပြပေးလိုက်တာ … သူ့ကိုတော့ပြောသားဘဲ … ဒီ ဆိုဒ်မှာက ဆရာ့ဆ၇ာကြီးတွေချည်းဘဲနော် …မင်းအရမ်းသွားမလုပ်နဲ့လို့ ….
ဆူမိုရေ မင်း တော့သရီးထဲဝင်လို့ ဝမ်းသာပါတယ်ကွာ။ ဘိုကျောင်းက စာတော်တဲ့ ကျောင်းသားဆိုတော့ မင်းတို့ကျောင်းရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားမှု အရည်အသွေးကို သိချင်လို့ မေးခွန်းလေးတခုလောက် မေးပါရစေ။ သိပ်မရှည်ပါဘူး။ အစ်ထအစ်စအေက ဆိုတာဘာကို ဆိုလိုတာပါလည်း။ ကိုယ်ပိုင်ညဏ်သုံးပြီး ဖြေနော်။